” ခုလို-အချိန်အခါ–Summer Holidays ” (Credit by Ko Thet) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » ” ခုလို-အချိန်အခါ–Summer Holidays ” (Credit by Ko Thet)	8
” ခုလို-အချိန်အခါ–Summer Holidays ” (Credit by Ko Thet)
Posted by Travis Zaw on Apr 9, 2015 in Business & Economics, Cultures, Environment, Facebook, Ideas & Plans, Society & Lifestyle | 8 comments
SST–ဆိုတဲ့–Special Service Tool —ဆိုတဲ့အထူးကိရိယာတန်ဆာပလာများနဲ့သာဖြုတ်ရလို့ပါ—
Alinn Z says: .ချောင်းသာမှာက ဖုန်းလိုင်း မိသေး
.ငွေဆောင်မှာတော့ ဘာဖုန်းလိုင်းမှ မမိချင်
အဲ့ဒီဘက် သွားမယ့်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ပိုစ့်လေးပဲ
ကျနော် မနက်ဖြန် သွားမယ့် ကရင်ပြည်နယ်ဘက်အတွက်
.ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်ကော ရှိသေးလား
အောင် မိုးသူ says: ချောင်းသာ ငွေဆောင် MEC တွေ မိသတဲ့
kai says: ဒီရေးနည်းနဲ့ ကျုပ်တောင် ခရီးသွားဆောင်းပါးရေးချင်လာပြီ…။
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. ဒီလိုပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာ ခရီးသွားချင်ရင်.. ကားကြပ်တာနဲ့ ဒုက္ခများတော့တာပါပဲ..။
၄နာရီခရီးကို .. ၁၀နာရီလောက်ကြာသွားတတ်တယ်လေ..။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါ… သေချာသိမ်းထားသင့်တဲ့ Travel tips တွေပါ…. ကိုယ်က ခရီးသိပ်မထွက်ဖြစ်တော့ ခရီးတစ်ခါထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာပြင်လို့ပြင်ရမှန်းမသိဘူး… ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေ များများရေးပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. ကျေးဇူးကမ္ဘာပါရှင့်..
Ma Ma says: (ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားကိုကျော်အပြီး—သင်ဖျူးဖျာ-မျိုးစုံထွက်တဲ့–အပြင်—
အဲဒါမပါမှာစိုးလို့ ကွန်မန့်မှာရေးတော့မလို့။ ပန်းတနော်မြို့က ရန်ကုန်နဲ့ ပုသိမ်ကြား အလယ်လောက်မှာရှိလို့……….
ကိစ္စကြီးငယ်ရှိလို့ ညအိပ်နားဖို့ လိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
စားစရာမျိုးစုံရနိုင်တဲ့ စားကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတဲ့အပြင်
အဆင့်မြင့်အအေးခန်းဧည့်ရိပ်သာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ ကြုံတုန်း ကြော်ငြာဝင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ခရီးအမြဲထွက်နေကျမို့ ခရီးထွက်ရင် ဘာတွေလိုသလဲဆိုတာ သိနေပြီ။ ဒါလေးကိုလည်း မှတ်သွားပါတယ်။
uncle gyi says: ကားဘီးလေထိုးတာ၅၀ ၆၀ ဆိုတာများနေသလားလို့ကိုသက်ရေ
manawphyulay says: မနောအတွက်တော့ မှတ်သားထားရုံပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်က ခရီးသွားနှစ်မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ခရီးစဉ်များ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ထားပါကြောင်း…